बढी उमेरका पुरुषतर्फ किन आकर्षित हुन्छन, युवतीहरु ? – Sourya Online
बढी उमेरका पुरुषतर्फ किन आकर्षित हुन्छन, युवतीहरु ?
सौर्य अनलाइन २०७६ कार्तिक २० गते ११:४० मा प्रकाशित
युवतीहरु विन्दास एवं कम उमेरका केटासँग डेट गर्छन् । तर, विवाहका लागि भने आफुभन्दा बढी उमेरकै पुरुष खोज्छन् । यसमा उनीहरुको सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा पनि गाँसिएर आउँछ । युवतीहरु अपरिपक्क युवासँग दाम्पत्य सम्बन्ध गाँस्न चाहँदैनन् । बरु आफुभन्दा निकै पाको उमेरकासँग उनीहरु राजी हुन्छन् । किन होला त ?
यस्ता छन् कारणहरुः
कैयौ पटक कम उमेरका युवतीहरु आफूभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । यस्तो अक्सर त्यतिखेर हुन्छ जब कुनै युवती बचपन देखि नै एक्ली हुन्छन् । परिवारमा पिता वा भाई जस्ता पुरुषको संरक्षण नमिलेको कारण उनीहरुलाई अपमान वा दुव्र्यवहारको सामना गर्नुपरेको हुन्छ । यस्ता युवतीहरु सजिलै आफूभन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिसँग आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्छन् । कैयौंपटक युवतीहरुको यो संकेतको र बाध्यताको फाइदा पुरुषले उठाएको पनि देखिन्छ ।
प्रलोभन वा लालचको कारणले पनि युवतीहरु उमेर भएका पुरुषहरुको चंगुलमा फस्छन् । कैयौं युवतीहरु धेरै सौखिन र फेसनेबल हुन्छन् । उनीहरुको आवश्यकता धेरै हुन्छ तर आवश्यकता पुरा गर्ने साधन सिमित हुन्छ ।
यस्तो स्थितीमा यदि कुनै धेरै उमेरको व्यक्ति जो साधनसम्पन्न छन् र पैसाको कमी छैन भने यस्ता युवतीहरु र उनीहरु तर्फ आकषिर्त हुन्छन् । यस समयमा उनीहरुले पछिसम्मको परिणाम देख्दैनन् । तत्कालिक लाभ नै उनीहरुको लागि सर्वोपरि हुन्छ । कैयौं युवतीहरु करियरको मामिलामा सर्टकट अपनाउन चाहन्छन् र धेरै ठूलो छलांग लगाएर पदोन्नती प्राप्त गर्न चाहन्छन् । यही लोभमा उनीहरु हाकिमसँग हिमचिम बढाउँछन् र हाकिमका धेरै उमेरलाई ख्याल नै गर्दैनन् ।
आकर्षण र प्रेममा फरक
कुनै राम्रो वस्तुलाई देखेर आकषिर्त हुनु एक सामान्य कुरा हो तर यो आकर्षणलाई जीवनभरको बोझ बनाउन आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्नु जस्तै हुन सक्छ । किनभने हरेक चम्किलो चीज सुन हुँदैन । फेरि पनि बदलिँदो समयको आवश्यकता वा बिना मेहनत सफलता हासिल गर्ने होड मा कम उमेरका युवतीहरु धेरै उमेरका पुरुषतर्फ आकर्षित हुनुलाई खासै राम्रो सुरुवात मानिँदैन । यो अज्ञानतामा उनीहरुको भविष्य दाउमै लाग्न पनि सक्छ ।